Kangitngit - Cebuano - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: kangitngit (Cebuano - Birmanês)
ကိုယ်၌ရှိသောအလင်းကို မှောင်မိုက်မဖြစ်စေခြင်းငှါ သတိပြုလော့။
ငါသည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကို နက်သော အဝတ် ဝတ်စေ၍၊ လျှော်တေအဝတ်နှင့် ခြုံ၏။
kun ang kangitngit, aron dili ikaw makakita, ug ang lunop sa tubig nagatabon kanimo.
မမြင်နိုင်သောမှောင်မိုက်သည် ညှဉ်းဆဲ၍၊ ပြင်းစွာစီးသောရေသည် လွှမ်းမိုးရ၏။
ရှောလမုန်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ထူထပ်သော မှောင်မိုက်ထဲမှာနေတော်မူသည်ဟု စကား တော်ရှိ၏။
ရှောလမုန်ကလည်း၊ ထာဝရဘုရားသည်၊ ထူထပ်သော မှောင်မိုက်ထဲမှာ နေတော်မူသည်ဟု စကား တော်ရှိ၏။
ang katubigan iyang gilibutan ug usa ka utlanan, hangtud sa mga utlanan sa kahayag ug kangitngit.
အလင်းနှင့်အမိုက်ဆုံမိရာ အပိုင်းအခြား၌ စကြဝဠာကို ကန့်ကွက်တော်မူ၏။
သမုဒ္ဒရာကို မိုဃ်းတိမ်နှင့် ငါခြုံ၍ ထူထပ်သော မှောင်မိုက်နှင့် ထုပ်ရစ်သည်ကာလ၌၎င်း၊
အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ မီးခွက်ကို ထွန်း၍၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သည် အကျွန်ုပ်၏မှောင်မိုက်ကို လင်းစေတော်မူ၏။
ငါ့ကို ယုံကြည်သမျှသောသူတို့သည် မှောင်မိုက်၌မနေစေခြင်းငှါ ငါသည်အလင်းဖြစ်လျက် ဤလောက သို့ ကြွလာပြီ။
အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ မီးခွက်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်၏ မှောင်မိုက်ကို လင်းစေတော်မူ၏။
သို့ရာတွင်၊ အလင်းသည် မှောင်မိုက်ထက်မြတ် သကဲ့သို့၊ ပညာသည် မိုက်မဲခြင်းထက်မြတ်သည်ကို ငါ သိမြင်၏။
ang dalan sa tawong dautan ingon sa kangitngit: sila dili manghibalo kong usa ang ilang napangdolan.
မတရားသောသူတို့၏လမ်းမူကား၊ မှောင်မိုက် ကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ သူတို့သည် လဲသောအခါ၊ အဘယ်အရာကို တိုက်မိသည်ဟု မသိရကြ။
nga nagabiya sa mga alagianan nga matul-id, aron sa paglakat sa mga dalan sa kangitngit;
ဖြောင့်မတ်သောလမ်းကိုစွန့်၍၊ မိုက်မဲသော လမ်းသို့လိုက်သောသူ၊
ginabuhat mo ang kangitngit, ug nahimo ang kagabhion, diin nanagkamang ang tanang mga mananap sa lasang.
ကိုယ်တော်သည် မှောင်မိုက်ကို စီရင်တော်မူ၍ ညဉ့်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုအချိန်၌ တောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ သည် တွားလျက် ထွက်တတ်ကြပါ၏။
kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw; kita dili iya kagabhion o sa kangitngit.
သင်တို့အပေါင်းသည် အလင်း၏သား၊ နေ့၏သားဖြစ်ကြ၏။ ညဉ့်၏သား ၊ မှောင်မိုက်၏သားမဟုတ်။
gipadala niya ang kangiub, ug nahimo kining kangitngit; ug sila wala magmalalison sa iyang mga pulong.
မှောင်မိုက်ကိုစေလွှတ်၍၊ မိုက်မဲစေတော်မူ၏။ သူတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်မပြုရကြ။
تر داڤي (Árabe>Malaio)fremmest (Dinamarquês >Francês)illustrato (Francês>Espanhol)ne la punissez pas (Francês>Inglês)informatie te verstrekken (Holandês>Francês)gratulor tibi de hac gloria (Latim>Inglês)transcorren (Catalão>Espanhol)mononymously (Inglês>Português)forthwith (Inglês>Maltês)tingnan ang iyong mga computer sa chromoting (Tagalo>Inglês)vengaanosotros tu reino (Espanhol>Latim)सेक्सी वीडियो नंगा (Hindi>Inglês)a buscar (Espanhol>Italiano)ferite gravissime (Italiano>Latim)harnesses (Inglês>Curdo)walang imposible sa diyos (Tagalo>Inglês)uzol (Eslovaco>Inglês)veateate (Estoniano>Inglês)sorry wrong number (Inglês>Hindi)सेक्सी वीडियो फुल (Hindi>Inglês)erfolgte komplikation (Alemão>Inglês):) hi i am fine thanks and you (Inglês>Russo)nanad ke bete ko english ma kea kathy hn (Hindi>Inglês)phasmatos incendia (Latim>Italiano)mongolica (Inglês>Espanhol)